Lalao PC 10 izay mitaky fepetra vitsivitsy | Gadget News
Paco L Gutierrez | 14/11/2021 14:00 | Nohavaozina amin'ny 14/11/2021 16:32 | General, Videogames
Mandroso hatrany ny teknolojia ary hita taratra amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika izany. Ao amin'ny tontolon'ny lalao video dia tsy voamarika izany fandrosoana izany ary mahita lalao maro kokoa miaraka amin'ny tanjaky ny sary lehibe kokoa sy tontolo midadasika kokoa isika. Midika izany fa raha te hanohy ny lalao amin'izao fotoana izao isika dia hiharatsy hatrany ny ekipantsika amin'ny fanatanterahana azy ireo., satria mitaky hery bebe kokoa isika.
Amin'ny sehatra toy ny consoles dia tsy manana io olana io izahay, satria raha tokony hanatsara ny fitaovana, dia ny mpamorona no mikatsaka ny hanatsara ny lalaony amin'ny rafitra tsirairay. Tsy mitranga izany amin'ny PC izay isika mpampiasa no tsy maintsy manamboatra ny lalao na ny fitaovantsika mba hankafizana ny lalao video amin'ny fomba milamina, izany no antony. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanampy anao izahay amin'ny fanaovana tampon'ny lalao 10 tsara indrindra izay ahafahantsika milalao miaraka amin'ny ekipa tranainy na manetry tena kokoa.
1 Inona no takina amin'ny lalao?
2 Ny lalao 10 tsara indrindra misy fepetra vitsivitsy
2.1 Diablo 2 nitsangana tamin'ny maty
2.3 Mandehana ny fitokonana
2.4 Age of Empires 2 Edition farany
2.5 Lohasahan'i Stardew
2.9 Anisan'ny U
Inona no takina amin'ny lalao?
Ny lalao video dia rindrankajy izay mitaky hardware mba hiasa, ireo fepetra ireo dia avy amin'ny processeur, sary, karazana fitadidiana sy habe, na ny rafitra miasa mihitsy. Ny vao haingana kokoa ny lalao dia matetika mangataka hery bebe kokoa sy fitaovana maoderina sy ankehitriny. Fa misy maningana ary izany lalao indie na dia vaovao aza, dia mandeha amin'ny fitaovana tranainy ary miaraka amin'ny faritra ambany indrindra.
Ny teboka iray hafa tokony hotadidina dia ny fividianana solosaina vaovao dia tsy voatery hanome anao fahafahana miditra amin'ny lalao rehetra amin'izao fotoana izao, satria misy faritra samihafa amin'ny singa, noho izany dia mbola ho afaka kokoa noho ny solosaina vaovao ny solosaina avo lenta taloha. midadasika na ambany. Hitantsika izany indrindra eo amin'ny sehatry ny solosaina finday, izay ahafahantsika mahita solosaina vaovao tanteraka izay tsy afaka mamindra ny lalao fototra indrindra. Izany dia satria ny kojakoja amin'ireo solosaina finday ireo dia lafo na tafiditra ao amin'ny solaitrabe ary natao ho an'ny asa andavanandro indrindra.
Mba hahazoana antoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny lalao ny PC-ntsika, dia tsara ny mampiasa ny programa CPU-Z ary ataovy azo antoka fa mifanaraka amin'ny kely indrindra takian'ny lalao resahina ny singa ao amin'ny solosainay. Ny fepetra takian'ny lalao dia azo jerena ao amin'ny fivarotana Steam na Epic mihitsy.
Ny lalao 10 tsara indrindra misy fepetra vitsivitsy
Diablo 2 nitsangana tamin'ny maty
Izy io dia mahazatra eo amin'ny kilasika izay natsangana tamin'ny fizarana sary vaovao tena nohavaozina. Ity lalao video ity dia momba ny a RPG efa lany andro, izay tena zava-dehibe amin'ny lalao ny fambolena sy famoronana ny ekipanay. Ny dikan-teny tany am-boalohany dia nanomboka tamin'ny taona 2000 ary nanova ny karazana anjara asa, lasa mpisava lalana amin'ity karazana lalao video ity.
Ny lalao video dia miavaka amin'ny halaliny rehefa mamorona ny toetrantsika sy manatsara azy ho amin'ny fetra tsy ampoizina, mamorona biby goavam-be afaka manimba fahavalo marobe amin'ny tifitra iray. Manana mode Multiplayer izahay hatramin'ny mpilalao 8 miara-miasa amin'ny Battlenet. Ho fanampin'ny fizarana ny traikefantsika amin'ny famongorana demonia amin'ny mpiara-miasa 7 hafa, dia afaka manao varotra sy miady amin'izy ireo ihany koa isika, ka manao lalao misy fahafaha-manao tsy manam-petra, izay tsy mitsahatra mahita tsiambaratelo.
Afaka mividy Diablo 2 Resurrected ao amin'ny fivarotana Battlenet isika amin'ny € 39,99
Minecraft dia tsy ho very ao amin'ny ambony mendrika ny sira, mainka fa amin'ity tranga ity, mitady ny tsara indrindra amin'ny fitaovana kely indrindra. Lalaon'ny Anjara asa izay ifandraisantsika amin'ny tontolo misokatra mifototra amin'ny fanorenana sy ny fambolena. Afaka mizara ny traikefa amin'ny namana amin'ny alàlan'ny tambajotra ihany koa isika ary miatrika ireo fanamby entin'ny tontolo tsirairay amintsika.
Na dia goavana aza ny lalao, ny sary dia tsy misy na inona na inona fa mitaky, ka ny ekipa rehetra dia afaka mamindra azy tsy misy olana. Ny faharetany dia tsy manam-petra ka tsy hisaraka amin'ny PC raha tsy tiantsika ao anatin'ny ora maro.
Afaka mividy Minecraft amin'ny Steam isika amin'ny € 19,99
Mandehana ny fitokonana
Ny rain'ny mpitifitra olona voalohany mifaninana, dia kilalao tsy mitaky fitakiana ihany koa izy io raha ny amin'ny fitaovana satria mampiasa fototra efa tranainy ary tsy niova firy nandritra ny taona maro. Na dia tsy dia manintona loatra aza ny lalao amin'ny sary, dia io no mahafinaritra indrindra hitantsika raha mila lalao fitifirana an-tserasera isika.
Tsotra ny foto-kevitra, vaky ady eo amin'ny ekipa roa ary misafidy izahay na ho polisy na mpampihorohoro., Ny hany iraka ataontsika dia ny handresy ny mifanohitra amin'izany, misafidy ny lafiny fidintsika isika, ny fitaovam-piadiana sy ny fahaiza-manao dia mitovy ary miankina amin'ny tanjonay ihany. Mazava ho azy fa ny polisy dia tsy maintsy manafoana ny fipoahana napetrak'ilay mpampihorohoro ary raha ianao no mpampihorohoro dia tsy maintsy manakana ny polisy tsy hanenjika azy.
Afaka mividy CSGO amin'ny Steam maimaim-poana isika
Age of Empires 2 Edition farany
Amin'ity indray mitoraka ity isika dia miresaka momba ny lalao paikady par excellence ho an'ny PC, tsy mety afa-tsy ny Age of Empires tsy mety maty amin'ny dikan-teny farany farany. nefa miaraka amin'ireo fanatsarana ireo dia manana fepetra faran'izay ambany ny lalao ary ho afaka hihazakazaka amin'ny ekipa rehetra izy.
Ny dikan-teny remastered an'ity mahazatra ity dia misy fampielezan-kevitra 3 sy sivilizasiona 4 izay handany ora tsy tambo isaina hamoronana ny miaramilantsika handresy ny faritanin'ny fahavalo, ankehitriny miaraka amin'ny sary nohatsaraina nefa mitazona ny maha-zava-dehibe izay nahasarika antsika nandritra ny folo taona mahery.
Afaka mividy AOE 2 DE amin'ny Steam isika amin'ny € 19,99
Jewel, no teny tonga lafatra hamaritana ity lalao ity, nomarihin'ny mpilalao sy ny mpitsikera ho sangan'asa na dia eo aza ny toa azy amin'ny endrika retro. Toa tsotra izany fa ny lalao dia misy fitsangatsanganana lalina sy lava toy ny vitsivitsy hafa, ao anatin'izany dia tsy maintsy manome aina ny toeram-pambolena taloha izay nolovainay tamin'ny raibenay izahay.
Toa tsotra ny foto-kevitra, fa amin'ity lalao milalao an-tsehatra ity dia tsy voatery hikarakara ny fambolena sy fiompiana rehetra ao amin'ny toeram-piompiana ihany isika.Raha tsy izany, dia tsy maintsy mahafantatra ny fifandraisana amin'ny sisa amin'ny vondron'olona mpamboly ihany koa isika ary manatsara ny toetrantsika sy ny tokantranontsika. Manana fahafahana hikaroka toeram-pambolena hafa izahay.
Afaka mividy Stardew Valley amin'ny Steam isika amin'ny € 13,99
Raha toa ahy ianao dia iray amin'ireo nankafy ny Hopitaly Theme angano 20 taona lasa izay, dia azo antoka fa hankafy ity Hopitaly Two Point ity ianao, dia paikady sy lalao fitantanana loharano izay iandraiketanay ny hopitaly tsy mijanona. marary adala ary tsy maintsy mikarakara azy ireo na inona na inona aretiny.
Ny tanjonay dia ny hitandrina mba hahatongavan'ireo mararinay soa aman-tsara any amin'ny fakan-kevitry ny tsirairay ary hiala amin'ny hopitaly ho salama tanteraka.. Betsaka ny vazivazy ary koa ny fihenjanana rehefa miady amin'ny areti-mifindra lehibe na onja mangatsiaka amin'ny hetsika hafa.
Afaka mividy ny hopitaly Two Point mahafinaritra amin'ny Steam isika amin'ny € 34,99
Ny fahavelomana sy ny tontolo misokatra dia miaraka amin'ity lalao mahavariana ity dia manolotra antsika ho tafavoaka velona ao anatin'ny tontolo aorian'ny apokaliptika izay ny fahavalontsika dia ny sisa amin'ny mpilalao an-tserasera. Hiezaka hamono sy handroba antsika izy ireo mba hahazoana ny fananantsika, amin’ny fampiasana fitaovam-piadiana na fandrika.
Hanomboka ny aventure isika Fa eo am-pikarohana dia hahita akora sy fomba fanamboarana hanamboarana ny tranontsika isika, toy ny fitaovam-piadiana na fitaovam-piasana. Fohy ny fotoana satria misy loza mitatao foana ary tsy fantatsika izay ho hitantsika, satria ny fahavalo dia afaka miray tsikombakomba hamely antsika raha manam-bola be isika ary manana fitaovam-piadiana tsara.
Afaka mividy Rust amin'ny Steam isika amin'ny € 39,99
Ny lalao niteraka fihetseham-po nandritra ny vanim-potoanan'ny areti-mifindra dia ity lalao fety feno hatsikana mavo ity lalao mini izay mampiray antsika amin'ny tolo-kevitra mahafinaritra izay hifaninanantsika hatramin'ny 60 jugadores. Ny lalao dia ahitana andiana fitsapana sy làlana misakana izay tsy maintsy ho haingana kokoa noho ny mpifanandrina amintsika mba handresy.
Ny fizarana ara-teknika dia tena tsotra ka tsy hanana olana isika rehefa manatanteraka izany amin'ny ordinaterantsika, na inona na inona fototra.
Afaka mividy ny adala Fall Guys amin'ny Steam isika amin'ny € 19,99
Ny iray amin'ireo lalao izay niteraka fahatsapana teo amin'ny Streamers dia ity Multiplayer mahafinaritra ity, izay olona 4 sy 10 no mihaona, amin'ireo vondrona roa ireo dia miforona izay misy roa mpisandoka izay te hamono ny mpiasan'ny sambon-danitra. Raha ny tanjon'ny ekipa dia ny hanatanteraka ny andraikiny maraina amin'ny sambo, ireo mpisandoka dia tsy maintsy manimba ny sambo amin'ny fanodikodinana ny sambo.
Ny hetsika ataontsika dia hampisaraka ny ekipa ary tsy maintsy hanararaotra isika rehefa irery ny iray amin'izy ireo hamono azy, satria raha misy mpikambana hafa ao amin'ny ekipa mahita anay mamono olona dia homeny anay ary horoahiny hiala amin'ny sambo izahay. . Na dia maty aza ny mpilalao dia manohy milalao ho mpijery nefa tsy afaka mifandray amin'ny ambiny, fa manao iraka.
Afaka mividy Among us amin'ny Steam amin'ny € 2,99 fotsiny izao amin'ny fampiroboroboana
Mamarana ny tampony izahay amin'ny zavatra ho an'ny mpitsikera sy ho an'ny mpilalao, iray amin'ireo firavaka tao anatin'ny folo taona farany. Hetsika sy fitifirana miaraka amin'ny mekanika mahazatra amin'ny sehatra izay hitantsika amin'ny lalao toa an'i MetalSlug nefa manana endrika tsara tarehy napetraka amin'ny sariitatra taloha, tena mitovy amin'ny sarimihetsika Disney voalohany tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 30.
Aza diso, ny hatsarany mahafinaritra sy mahafinaritra dia tsy midika fa miatrika dia an-tongotra isika, misongadina noho ny fahasarotany ny aventure noho izany dia ho fanamby ho an'ny mpandray anjarantsika ny fiampitana ny tontolo maharikoriko feno fahavalony. Sangan'asa tena izy izay tsy maintsy porofointsika hoe eny na eny, indrindra raha jerena fa saika ny ekipa rehetra dia afaka mitantana azy mora foana.
Afaka mividy Cuphead amin'ny Steam isika amin'ny € 19,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Lalao PC 10 izay mitaky fepetra vitsivitsy
israHell dia hoy izy:
Naoty ratsy, tsy misy rohy ary ny sarany rehetra dia azo antoka fa tsy misy intsony !!
Valio ny israHell
Misaotra tamin'ny soso-kevitra, nampiana rohy. Horaisinay fanamarihana ny hampiditra tolo-kevitra momba ny lalao maimaim-poana ihany amin'ny ho avy.